ထောက်ပံ့ပေးမှုများ | ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here (DDM)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂၉-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here29-8-2019(Total)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂၆-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here (DDM)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂၃-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here (DDM)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂၂-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ်Download Here(DDM)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂၁-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here (DDM)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် (၂၀-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် Download Here DDM
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် (၁၉-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် Download Here (DDM)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် (၁၆-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ) ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် Download Here DDM(16-8-2019)
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ်Download Here15-8-2019
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၁၄-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ) ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here (DDM) (14-8-2019)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ၊ ရက်နေ့မှစ၍ ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၁၄-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ) ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေDownload Here (DDM) (14-8-2019)
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ်Download Here13-8-2019(ALL)
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် (၁၃.၈.၂၀၁၉ နေ့ထိ) Download Here13-8-2019
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here12-8-2019(ALL)
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် (၁၂.၈.၂၀၁၉ နေ့ထိ) Download Here12-8-2019
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ်10-8-2019 Flood Total
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် 10-8-2019 Flood
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေစာရင်းချုပ် Download Here DDM (25-6-2019)
(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေ Download Here DDM (25-6-2019)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၃၀.၇.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၃၁.၇.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (31-7-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (1-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (2-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၃.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (3-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၄.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (4-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၅.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM(5-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၆.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (6-8-2018) Download Here DDM (6-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၇.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (7-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၈.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) DDM (8-8-2018) Brief DDM (8-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၉.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) DDM (9-8-2018)_Detail
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၀.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (10-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၁.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (11-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၂.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (12-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၃.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) DDM (13-8-2018).
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၄.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) DDM (14-8-2018)
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၅.၈.၂၀၁၈ နေ့ထိ) DDM (15-8-2018)_Detail
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၆-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (16-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၇-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (17-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၈-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (18-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၉-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (19-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၀-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (20-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၁-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ)Download Here DDM(21-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၂-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (22-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၃-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) DDM (23-8-2018).pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၄-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (24-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၆-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (26-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၇-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ)Download Here DDM (27-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၈-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (28-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၉-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ)Download Here DDM (29-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၃၀-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ)Download Here DDM (30-8-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၈-၂၀၁၈ နေ့ထိ)DDM (31-8-2018)_Detail
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ)DDM (1-9-2018) details
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ)DDM (2-9-2018)-1
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၃-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (3-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၄-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (4-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်းတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၅-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (5-9-2018).pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်းတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၆-၉-၂၀၁၈ နေ့အထိ) DDM (6-9-2018)_Detail
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၇-၉-၂၀၁၈ နေ့အထိ)Download Here DDM (7-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၈-၉-၂၀၁၈ နေ့အထိ)Download Here DDM (8-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၉-၉-၂၀၁၈ နေ့အထိ)Download Here DDM (9-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၀-၉-၂၀၁၈ နေ့အထိ)Download Here DDM (10-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၁-၉-၂၀၁၈ နေ့အထိ)Download Here DDM (11-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် ((၁၂-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (12-9-2018).
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် ((၁၃-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (13-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် ((၁၅-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (15-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၁၇-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ) Download Here DDM (17-9-2018)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၁-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ)Download Here DDM 21-9-2018
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ရေဘေးဖြစ်ပွားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုစာရင်းချုပ် (၂၄-၉-၂၀၁၈ နေ့ထိ)Download Here DDM (24-9-2018)